कालो नुन अथवा बिरे नुनले खाना स्वादिष्ट बनाउनको साथै अन्य फाइदा, यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
तपाईलाई बिरेनुनका यति धेरै फाइदाहरुको बारेमा थाहा थियो कि थिएन ? तपाईका साथीहरु जो फेसबुकमा छन् तिनलाई थाहा होला कि नहोला ? कृपया सेयर गरेर ति सम्म पनि यो जानकारी पुर्याउँन हुन हाम्रो अनुरोध छ ।
Topics #कालो नुन #बिरे नुन #सिधे नुन
Don't Miss it कति खाने कार्बाेहाइड्रेट स्वस्थ रहन ?
स्याउ स्याउमा फोस्फोरस र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छन् । तनाव उत्पन्न भएको बेला खुम्चिएका…
पिज्जा मन पर्छ ? अब घरमै बसेर यसरी सजिलै बनाउनुहोस् स्वादिष्ट भेज पिज्जा
पिज्जा आधुनिक खानाका परिकारमा सबैजसोको लागि प्रिय परिकार हो । आजकल रेष्टुरेन्टको मेनुमा खोजिने परिकार मध्ये पिज्जा पनि अगाडी आउँछ…
कपाल प्रत्यारोपण कति सुरक्षित छ ?
कपाल प्रत्यारोपण एउटा शल्य प्रक्रिया हो, जसमा टाउको पछाडि र ‘साइड’मा केश झरेको ठाउँमा लगाइन्छ । कपाल नभएको ठाउँमा प्रत्यारोपण…